करिब २ अर्बको साढे ४ लाख थान साइकल आयात, कुन देशबाट कति ? - Arthatantra.com
काठमाडौं । नेपालमा १ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको साइकल आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विभिन्न देशबाट ४ लाख ५३ हजार ३७५ थान साइकल आयात भएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको चैतमसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्रसहित १५ देशहरुबाट साइकल आयात भइरहेको छ ।
चालु आवको नौ महिनामा चीन, भारत, डेनमार्क, घाना, इजरायल, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई), बेलायत, अष्टे«लिया, जर्मनी, इन्डोनेशिया, ओमन, सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका लगायतका देशबाट उक्त साइकल आयात भएको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ । यी मुलुकहरुबाट साइकल, ट्राई साइकल आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा आयात भएका साइकलमा सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा भारतबाट १ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको २ लाख ९७ हजार ८४२ थान साइकल भित्रिएको हो ।
विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म चीनबाट ५३ करोड ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ५४ हजार ९७९ थान र ताइवान १ करोड ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको १४९ थान साइकल आयात भएको छ ।
त्यसैगरी बेलायतबाट ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६२ थान, यूएईबाट २ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ थान, कतारबाट १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६० थान, डेनमार्कबाट ९ हजार, घानाबाट २० हजार रुपैयाँ, इज्रायलबाट १० हजार रुपैयाँको साइकल आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार सिंगापुरबाट ६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ थान, कुवेतबाट ४ हजार रुपैयाँको १ थान, अष्टे«लियाबाट ६ हजार रुपैयाँको १ थान, जर्मनीबाट २१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ थान र ओमनबाट ३ हजार बराबरको १ थान साइकल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाबाट भने ३ थान मात्रै साइकल नेपाल भित्रिएको छ । उक्त साइकलको मूल्य ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अन्य देशबाट ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको ८ थान साइकल नेपाल भित्रिएको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १५:०९ मा प्रकाशित
अघिल्लाे भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षाका लागि तोकियो मिति र समय, केन्द्र कहिले ? (सूचनासहित)
पछिल्लाे २ अर्ब १९ करोड राजस्व छल्ने १३ फर्म विरुद्ध मुद्दा दायर